[solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Hardware Problems » [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem]
1 [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem] on 12th May 2010, 1:21 pm
အစ်ကိုတို့ အမတို့ရေ ကျွှန်တော်သိချင်တာလေးမေးချင်ပါတယ် ကျေးဇူးပြုပြီဖြေပေးပါနော် boards တိုင်းboard တိုင်းမှာ powerတို
restart တို့ကို ဘယ်လို့တက်လည်းသိချင်ပါတယ် တစ်ချိူတွေကရေထားတယ်နော် ်တစ်ချို့တွေကရေးမထားဘူး ဘယ်လိုရှာပြီတပ်ရမလည်း
ဘယ်လို့နေရာတွေမှာဘယ်လိုတပ် ရတယ်ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ ဖြစ်နှိုင်ရင် ပုံနဲ့တစ်ကွရှင်ပေးနှိုင်ရင် အစ်ကိုတို့အမတို့ကိုအရမ်းကျေး ဇူးတင်လို့ဆုံးမှာကိုမဟုတ်တော့ပါဘူးတစ်ကယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီဖြေပေးပါ p3 p4 775 တို့ကိုပုံနဲ့ တစ်ကွရှင်းပြပေးပါနော်
2 Re: [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem] on 12th May 2010, 6:08 pm
အကို manual book ပါတယ် တယ်.... အဲဒါဖတ်ကြည့်
3 Re: [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem] on 13th May 2010, 8:31 am
မပါတဲ့ဟာတွေကျရင် အခတ်တွေတက်လို့ပါ Board မှာလည်းမပါရင် အရမ်းခတ်တယ်အစ်ကိုရယ်
4 Re: [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem] on 13th May 2010, 9:44 am
ရှော့ရိုက်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါလား အဆင်ပြေနိုင်တယ် ၊ အိမ်က စက်ကို
တစခြင်းဖြုတ်ထားတော့ ပါ၀ါပေးရင် ၀က်အူလက်လေးနဲ့ ရှော့ရိုက်ပေးလိုက်တယ် ။ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ ။
စာတွေမပါရင်တော့ တစ်ခုခြင်းစီ စမ်းကြည့်လိုက်မှ အဆင်ပြေနိုင်မယ် ။
5 [Problem] on 17th May 2010, 8:17 pm
ကို samurai ပြောသလို စမ်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငုတ်ကလေးနှစ်ခုကို ထိရုံလောက်ပဲ ရှော့ရိုက်မှရတယ်ဗျ။ အချိန်နည်းနည်းကြာသွားရင် တစ်ကယ်ရှော့ဖြစ်ပြီး board ကြွသွားတတ်တယ်ဗျ။ ကိုယ်တွေ့ပါ [You must be registered and logged in to see this image.] ကိုလမင်းရေ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ board တော်တော်များများပေါ်မှာ manual ပါပါတယ်။ တော်တော်လေးနိမ့်တဲ့ p3 board အချို့မှာပဲ မပါတာပါ။ 478, 775 (အားလုံးနီးနီး)မှာ ပါပါတယ်။ ကြိုးတွေတပ်ရမယ့်နေရာမှာ power အတွက်ဆို pwr+ pwr-, reset အတွက်ဆို re(or)res+ res-HDD+ HDD- စတာတွေကို ကြိုးတပ်ရမယ် ငုတ်ကလေးတွေနားမှာ ရေးထားပါတယ်။ 775 တော်တော်များများကတော့ cpu fan နားတဝိုက်မှာ ဇယားကွက်လေးနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ပုံလေးတွေရှာကြည့်ပါဦးမယ် နည်းနည်းလောက်စောင့်ပေးပါဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem] on 18th May 2010, 9:57 am
အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်ကို ခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျွှန်တော်လည်းခုမှကွန်ပြူတာကိုလေ့လာတာမို့လို့ပါ အရမ်ကိုကျေးဇူတင်ပါတယ်နော် စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ် မှားရင်ပြန်မေးမယ်နော်
7 Hardware installation(Movie) on 18th July 2010, 6:46 pm
ခင်မင်စွာဖြင့်ချစ်သူငယ်ချင်းများ[You must be registered and logged in to see this link.]
8 Re: [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem] on 18th July 2010, 9:11 pm
Thanks for contributing ဒါပေမဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်က 370 mb လောက်တောင်ရှိတယ်ဒေါင်းရဲဘူး..ဒေါင်းရဲဘူး..။
9 Re: [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem] on 19th July 2010, 12:03 am
အနော်ရှာကြည့်တာတော့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက သိပ်မတူသလိုပဲဗျ အကိုနေနဲ့ တပ်မဲ့ ဘုတ်အမည်နဲ့ ဂူဂယ်လင်းလုပ်ကြည့်ရင်တော့ရနိုင်မယ်၊ ဒါကတော့သိပ်မလွယ်လှဘူး နက်ရှိနေမှဖြစ်မှာ....
ဖြုတ်တဲ့အခါ မှတ်ထားရင်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ အနော်ဆိုအဲ့လိုပဲမှတ်ထားနေကြ ဟီး...
နောက်တစ်ခုက စက်မှာ တပ်ပီး စမ်းကြည့်တဲ့နည်းလဲသုံးတယ် အဲ့ဒါက ပြသနာနည်းတယ် လောင်သွားမှာ မကြောက်ရလောက်ဖူး..... ရှော့ က အခန့်မသင့်ရင် .....
10 Re: [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem] on 22nd July 2010, 1:56 pm
ဒေါင်းလို့မရဘူးဗျ စာအုပ်က ifile နဲ့ဖြစ်ဖြစ် mediafire နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တင်ပေးပါ့လား ဟဲ [You must be registered and logged in to see this image.]
11 Re: [solved]motherboard မှာ power ကြိုးတွေဘယ်လိုတပ်ရမလဲ [Problem]